မေစစ်ပိုင်| September 14, 2012 | Hits:4,306
ရန်ကုန် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ အပြီးသတ် သဘောတူညီချက်တွေ ရနိုင်မလားမြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍ ပါဝင်ခွင့်ရရေး လုပ်ဆောင်မည်ဟု ဆိုပအို့ဝ် အဖွဲ့နှင့် ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်း တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားပထမ ကမ္ဘာစစ် နှစ် ၁၀ဝ ပြည့်တော့စစ်အေးခေတ် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး တင်းမာမှု တကျော့ ပြန်လာနေပြီ
shwe September 14, 2012 - 6:39 pm To see the pictures of the refugees are so heart aching.Why are they so obstinate?How can they see the innocent children in poverty without education?I feel suffocating.I once went to Mandalay by the newly built road and was speechless and very sad to see many school-children-aged workers in the restaurants at midnight serving the meals.The people in abject condition.Please stop fighting for the sake of our innocent people.
Reply Youth September 14, 2012 - 8:11 pm ညီအကိုယ်တို.လိမ်ခံရတာ နှစ် ၆၀ ကျော်ရှိပြီ သတိနဲ.နေကြဟေ့…………….
Reply kyaw lwin September 14, 2012 - 9:28 pm ငြိမ်းချမ်းရေးသည်အဓိက။
Reply shanglawt September 14, 2012 - 10:08 pm This demonstration will definitely help stopping the war between the Burmese Army and the Kachin Independence Army. We don’t have time for this nonsense injustice war on ethnic minorities. It’s time for our beloved country to go ahead and catch up our neighbors. We may be decades late but if we are united and march together in peace and harmony, we will regain once our famous status for our country. American, EU and other countries are already there to help us, except China which is just waiting to suck the fuck out of our country as always. So it’s time to stop this war now. Ethnic minorities in Burma have been treated/discriminated badly for decades. We can’t let it happen anymore. Brothers and sisters, stand together and bring this elusive peace for the country you love!
Reply နတ်ဆိုး September 15, 2012 - 3:40 am ကချင်တပ် (ကချင်လူမျိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် ) က တရုတ်ပြည်မှာပဲ ဆွေးနွေးချင်နေတယ်ဆိုတော့ တရုတ်ကို တော်တော် အားကိုးပုံပဲ။ ကိုယ့်လူမျိုးဒုက္ခသည်တွေကို နှင်ထုတ်နေတဲ့ တရုတ်ကို စိတ်မနာနိုင်ဘဲ တရုတ်ပြည်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာက KIA က ဘယ်လိုတပ်မျိုးလဲလို့မေးခွန်းထုတ်စရာပဲ။ သမ္မတက နေပြည်တော်မှာလာဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့ သိရတယ်။ နိုင်ငံ့အကြီးအကဲကိုယ်တိုင်က နေပြည်တော်လာခဲ့ပါဆိုတာကို မယုံဘူးဆိုရင်တော့ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာမှာပဲ။ သူတို့လာရင် ဒီက ဘာလုပ်လို့ရမှာမို့လို့လဲ။ တစ်နိုင်ငံလုံးကကော နိုင်ငံတကာကပါ စိတ်ဝင်စားကြမယ့်ကိစ္စဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ စောင့်ကြည့်နေမယ့်သူတွေလည်း မနည်းလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ အားလုံးကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကြားမှာလုပ်ကြံလို့လည်းမရ၊ ဖမ်းချုပ်လို့လည်းမရ။ ဘာကိုစိုးရိမ်စရာရှိလဲ။ နောက်တစ်ခုက အပစ်မရပ်သေးဘဲ နိုင်ငံရေးအရင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာလည်း သဘာဝမကျဘူးလို့ထင်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့ လူကြီးတွေအချင်းချင်း ဆွေးနွေးနေတုန်းမှာ မပစ်ကြနဲ့ဆိုတာတော့ ဖြစ်သင့်တယ်ထင်တယ်။ အပစ်မရပ်သေးဘဲ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ စစ်တို့သဘောအရ စစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့သဘောတူညီချက်ရှိမထားရင် ဘယ်ဘက်ကစပစ်ပစ် အပြစ်ဆိုသာမယ်မထင်ဘူး။ နိုင်ငံတကာဥပဒေမှာ မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ရန်အတွက် လက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်ခွင့်ဆိုတာ ကျင့်သုံးနေတာပဲလေ။ စစ်ဖြစ်နေတာ ကလေးကစားနေတာမဟုတ်ဘူး။
Reply ကချင် September 15, 2012 - 2:56 pm အော်စစ်ဖြစ်နေတာလား၊ဘယ်မှာလဲ၊ ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲ၊ ….မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ရန်အတွက် လက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်ခွင့်ဆိုတာ…ဘယ်သူတွေ ကယူနေတာလဲ၊ စစ်တပ်ဆိုရင်တော့ အလွန်သနားစရာဘဲ၊ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ခံနေရတာ ဆို ရင်သွားကူညီလိုက် ပါအုံး လူကြား လို့မှမကောင်း။ တစ်ခု တော့ရှိတယ်…..မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ရန်အတွက် လက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်….တယ် ဆိုတဲ့ယူဆချက်က မတရား အတိုက်ခံရတဲ့သူရဲ့ယူဆချက်ပါ တိတ်မစိုးရိမ်ပါနှင့်မြန်မာပြည်ကို စစ်တပ်အုပ်ချူပ်ခဲ့ပြီး ယခုအချိန်democracy ပြောနေ၊လုပ်နေသူတွေက စစ်တပ်ကိုအမြစ်ဖျက်ခြင်လို့ ခေါင်း စဉ်အမျိုးမျိုးတပ်ပြီး နယ်ခြားမြေခြား မှာ နှစ်ဖက်စလုံးသေလည်း အေးရော်လုပ်နေတာပါ၊ ကြာကြာတော့ဘယ်အရူးကဘယ်သူ့အတွက်လုပ်မလဲ။ လူတစ်စုကလွတ်တော်စည်းဝေးတွေမလုပ်နိုင်အောင်နေပြည်တော်မှာလာတိုက် တာကိုမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ရန်အတွက် လက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်….ပစ်နေတာဆိုရင်တော့ ပြည်သူများကြည့်နေမည်မထင်ပါ သို့သော် % ပြည့်မထင်ရဲသေးပါ။
Reply Uraw Gam September 15, 2012 - 5:40 pm အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလို.မခေါ်ဘဲ တပ်တွေခွာရေး သဘောတူညီချက်လို. နာမယ်တပ်ရင်ကောင်းလိမ့်မယ်၊ လိပ်ခံ တည်းလည်း အခြေအနေ များကျော်လွန်နိုင် မလား လို.ပါ၊
Reply swe htwe September 15, 2012 - 8:41 pm That ‘s right. KIa should accept President’s offer.
Reply min min September 15, 2012 - 8:38 am နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်တပ်မတော်ဆိုတာတခုတည်းပဲရှိ၇မယ်KIA ဆိုတာလက်နက်ကိုင်အနိုင်ကျင့်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားသလိုဖြစ်နေတယ်ကချင်လူမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့
Reply Uraw Gam September 15, 2012 - 5:52 pm KIA က စစ်ဦးစီးချုပ်တဦးတည်းအောက်မှာ ပြည်ထောင်စုတပ်အဆင့် အတန်း ပေးဖို.တောင်းတာ ကို မပေးဘဲ BGF လုပ်ခိုင်လို. ထချကြတဲ့အထိဖြစ်ကုန်တာ၊ အစိုးရက သဘောထားမကြီးဖူးလို.ဲမြင်တယ်၊ ခုလဲKIO တင်ပြထားတာတွေမဖြေဘဲ တွေ.ဖို.လောက် အကြောင်းကြားနေတာရှိတာဘဲ၊ သဘောတူမူကြမ်းကို email နဲ.သဘောတူပြီး နေပြည်တော်မှာ တခါတည်းလက်မှတ်ထိုးဖို.ဆိုရင် တော့ OK ဘဲ၊ အရင်တင်ပြချက်တောင်းဆိုချက်တွေလဲမဖြေ၊ ဘာဦးတည်ချက်မှလဲမရှိ ဆိုတော့ နေပြည်တော်ရောက် ပီး ဘာလုပ်ကြမှာတုံး၊
Reply ပလဲငွေရောင် September 15, 2012 - 8:57 am မြန်ပြည်ကြီး အေးချမ်းသာယာရှိပါစေ-
Reply ကချင် September 15, 2012 - 2:12 pm မြန်မာပြည် ဆိုတာကိုစစ်တပ် ခေတ်လောက်ဘဲနား လည်ပြီး နိုင်ငံရေးဆိုတာကိုစစ်တပ် နှင့်ဘဲတွဲမြင်တတ်တဲ့ လူ တွေDEMOCRACY ပြောနေပြီး စစ်တပ်နဲ့ဘဲ တန်တယ်။ သမိုင်း ကို လည်း သူများပြောသလောက်ဘဲ သိ၊ အနာဂါတ်ကိုလူနည်းစုအတွက်ဘဲလုပ်နေတာ၊ အများ စုကဒုံရင်းဘဲ၊ အဲဒီအများ စုထဲမှာ KIAကချင်ဆိုတာအနည်း ဆုံးဘဲ၊ စစ်တပ်နဲ့ဘဲနေခြင်သေးရင်တော့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စစ်တပ်နဲ့KIAအရေးကိုအဓိကကျသော မြန်မာ့democracy ဖြစ်စင်လို့ မ မြင်နိုင်ဘူးပေါ့၊မြင်တဲ့သူမြင်နေပြီ လေ၊၊ ကျန်ခဲ့ဆရာရှိုရင်တော့အများစု ကချင်KIAအပါဝင်ပေါ့လေ၊အများ စုထင်သလို KIA ကချင်တွေ သေကုန်လို့ခုနကပြောတဲ့အများစုကစံစားရမှာ လား၊အဲ့လိုဆိုရင်တန်တယ်ပြောရမှာပေါ့။ တယ် မထင်ပါ မြန်မာပြည်ရဲ့အများစုဆင်းရဲသားက၊ စစ်တပ်ကျေးဇူးကြောင့်ဆင်းရဲမြဲပါ။ တိုင်း ရင်း သား တစ်စုစုသာ စစ်တပ်စနစ်ကိုခြေမှုန်း နိုင်ရင်တော့တိုင်းရင်းသား တွေကတော့နဂိုတောင်း တဲ့ကိုယ့်ဒေသကိုယ်အုပ်ချူပ်ခွင့်သာယူမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ခြယ်လှယ်မည်မဟုတ်ပါ၊ စိတ် လည်း မကူး ခဲ့လို့democracy အသွင်သည် အများ စုအတွက်လည်း မျော်ရသောအရာမဟုတ်၊ လုပ်ယူရသောအရာ ဟုမြင်လာစေမည်၊။ သဘောမတူရင်တော့စစ်တပ်အတိုင်းပေါ့အများစုကဆက်မျော်ကြတာပေါ့၊ တာပေမဲ့တစ်ရောက်ထဲ တနေရာစီဆိုရင်ပြင်း ဆရာကောင်းတာပေါ့အဖေါ်ရှာသင်တာပေါ့နော်၊၊ မှတ်ချက်။ ။တပ်မတော်သားများအားရှာကြံသတင်း ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ၊ အရှိတိုင်း ပြောလိုတ်ခြင်းသာ။
Reply ak September 19, 2012 - 10:22 pmုကေအိုင်အေကော စစ်တပ်မဟုတ် လို့ ဘာလဲ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာစစ်တပ် နှစ်ခုရှိလဲ…။
Reply Uraw Gam September 15, 2012 - 5:30 pm ရှေ.တန်းမှာ အပြင်းအထန် ရန်စောင်နေတုံး အစိုးရထိမ်းချုပ်တဲ့နေရာမှာတွေ.ဖို.ကဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ။ ပြည်ထောင်စုတပ်ဖွဲ.ဖို.ပြောတာကို အရေးထား ဆွေးနွေး ဖို.လိုပါတယ်။ ကချင်တွေဟာပြည်ထောင်စုကို ကာကွယ်ရာမှာ တရားဝင် ပါဝင်ဖို.ကိုသာတောင်းနေတာပါ။ အဖြေကတော့ လုံးဝခြေမှုံးရေးဆိုတော့ မတတ်သာဘဲ ကာကွယ်စစ်နွှဲနေရတာပါ၊ အစိုးရတပ်လုပ်ပုံက လူမျိုးဖြုတ် စစ်ပွဲပုံစံအထိ ဖြစ်နေတာ လူတိုင်း မြင်တဲ့အတိုင်းပါဘဲ၊ KIA မို.လို.သာ ဒီလောက်များပြားတဲ့ တပ်မတွေ က ထုထောင်းနေတာကို ကြံ.ကြံ.ခံနိုင်နေတာဖြစ်တယ်၊ နိင် ငံခြား စစ်အအတွက်သာ reserve ထားတဲ့ တပ်မ တွေအထိ မလိုဘဲ သုံးခဲ.ကြတယ်။ ကျွံနေတဲ့အစိုးရတပ်တွေကို ဆုတ်လိုက်ရင် သေနတ်သံစဲသွားမှာ ကို သိ ရဲ.သားနဲ. စွတ် တက် စွတ်နေရာယူဖို. သေနတ်နဲ.တေ့ထားနိုင်ဖို. ကြိုးစားနေတာဆိုတော့ ယုံကြည်မှုက သုညအောက်ရောက်သွားပြီပေါ့၊